ဆန့်ကျင်နေသော တောင်တန်း (ရုပ်ရှင်)
ထရန်စဖော်မာ စက်ရုပ်များ - နောက်ဆုံး သူရဲကောင်း
မဉ္ဇူရီနယ် အက်ဘီမြို့ပြင်က ဘေဘုတ်သုံးခု (ရုပ်ရှင်)
အပိုလို ၁၃ (ရုပ်ရှင်)
အဗာတာ (၂၀၀၉ ရုပ်ရှင်)
အဇာတသတ်မင်းလက်ထက်တွင် ၎င်း၏ အဆက်အနွယ်တော်စပ်သူမင်းတစ်ပါးသည် ရာဇဝတ်ဒဏ်ပေးခံရ၍ နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုအနှင်ထုတ်ခံရသူသည် ကလေးအရပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ ကလေးမြို့သည် တောင်များဝိုင်းရံနေသဖြင့် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်နှင့် ဆင်တူနေသဖြင့် ထိုအရပ်တွင် မြို့တည်ကာ နေထိုင်ခဲ ...
ခွန်ချို၊ ခွန်သာအတွက် ပုခန်းမင်းကျော်စွာသည် ရှက်နာစိတ်ဖြစ်ကာ မင်းကြီးအား လုပ်ကြံ၍ ထီးနန်းရယူပြီး ပုလဲယဉ်ကို မိဖုရားမြှောက်ရန် ကြံစည်လေတော့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ခွန်ချို၊ ခွန်သာတို့သည် အရွယ်ရောက်လာ၏။ ထိုအခါ ပုခန်းမင်းကျော်စွာသည် မိမိ၏ အကြံအစည်ကို အနှောက ...
သက္ကရာဇ် ၇၃၉ ခုနှစ်တွင် အနော်ရထာမင်းသည် တရုတ်ပြည်သို့ မြတ်စွယ်တော်ပင့်ရန် သွားရာမှ အပြန်တွင် မောပြည်သို့ ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ မောမင်းသည် မိမိ၏ လှပသည့် သမီးတော်" စောမွန်လှ” နှင့် ရွှေသင်ဖြူး ငါးချပ်ကို ဆက်သခဲ့သည်။ အနော်ရထာမင်းကြီးသည် စောမွန်လှအာ ချ ...
ကုမ္ဘဏ်နတ်တို့သည် ဝမ်းဗိုက်ကြီးမား၏။ မျက်စိသည် နီမြန်းပြူးကျယ်၏။ ဝှေးစေ့သည် အိုးစရည်းကြီးတမျှ ကြီးမား၏။ ကုမ္ဘ = အိုးစရည်းလောက်ကြီးသော၊ အဏ္ဍ = ဝှေးစေ့ရှိသူ။
သက္ကရာဇ် ၆၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဖြစ်၏။ လင်းဇင်းမင်းဆက်ဖြစ်သည့် ဗြရာမသွန်မင်းနှင့် ကျမိုင်းမင်းသမီးတို့သည် လက်ထပ်ကြပြီးနောက် နဂါးသေရွာတွင် တနင်္သာရီမြို့ကို တည်ထောင်ကြ၏။ ထိုသို့ မြို့ကို တည်ထောင်သည့်အခါ ရေဘေးဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ပျက်စီးလျက် ရှိနေလေသည ...
သမိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုမူ သိရှိရခြင်း မရှိသေးပေ။ နတ်ကြီး ၇ ပါး၏ အမည်များမှာ ကျောက်ကုလား ဘိုးဘိုးကြီး ဂိဇ္ဈကုဋ်အရှင်ကြီး တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ရွှေကိုင်ချောင်းဆုံအရှင်ကြီး ဘိုးဘိုးကြီး သော့ကိုင်သခင်မ ဘိုးမင်းကြီး ဘိုးသော့မင်း
ဆရာတော်သည် ဖိုဝင်ရန် အချိန်ရောက်လာသည့်အခါ ကျော်စွာအား တပည့်အဖြစ်နှင့် စောင့်ရှောက်ရန် ခေါ်လေသည်။ ထိုအခါ ကျော်စွာသည် ဇနီးဖြစ်သူ မယ်သော်တာနှင့် သားဖြစ်သူ ဝံသာကို စိတ်မချသဖြင့် မလိုက်နိုင်ကြောင်း ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဆရာတော်သည် ဘာမျှ မပြောဘဲ သော်တ ...
ကွမ်ယင် ကို ဂျပန်ဘာသာဖြင့် ခမ်နွန်ဟု ခေါ်သည်။ ကွမ်ယင်မယ်တော် ဆိုသော နတ်သည် မဟာယာနဂိုဏ်းကြီးမှ အဓိကထား၍ ကိုးကွယ်သော အဝလောကိတေသွရ ဘုရားလောင်းမှ ဆင့်ပွား ယူထားသော နတ်ဖြစ်သည်။ အဝလောကိတေသွာရသည် မူလက ပုရိသလိင်ဖြစ်သော နတ်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ အေဒီ ၈-ရာစု နောက ...
ခမဲပြင်ဘိုးဘိုးကြီး သည် မြန်မာ့တို့ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည့် နတ်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ခမဲပြင်ဘိုးဘိုးကြီးနတ်နန်းသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကဝမြို့နယ်၊ ခမဲပြင်ရွာအနီးတွင် တည်ရှိသည်။
စာရေးတော်ကြီးသည် ရွှေဖျဉ်းညီနောင် လူ့ဘဝအတူနေစဉ်အခါက စာရင်းအင်းရေးမှတ်ပေးရသူ ကိုးကျောင်းဒါယကာ စာရေးတော်ကြီး ဦးသာနိုး ဖြစ်သည်။ ဦးသာနိုးသည် လောင်းကစားနှင့် အသောက်အစား၌ ခုံမင်ပျော်ရွှင်တတ်သည်။ ၎င်း၏ ဇနီးမှာ ဘို့မယ် ဖြစ်သည်။ အနော်ရထာမင်းသည် တရုတ်ပြည်မ ...
တောပုန်းနတ်သည် လူပျိုကြီးဘဝမှ နတ်ဖြစ်သွားသူ ဖြစ်သည်။ တောရွာရှိ မိန်းမပျိုများသည် တောထဲသို့ ရာသီအလိုက် ဖူးပွင့်နေကြသည့် ပန်းများကို ခူးရန် သွား၏။ ထိုအခါ တောပုန်းနတ်သည် နောက်ပိုးပိုးရင်း လိုက်သွားကာ ပန်းပင်ပေါ်သို့တက်၍ ပန်းများကို ခူးပေးခြင်း၊ ခါချ ...
ထိုထီးတို့မှာ နန်းတွင်း၌ အမျိုးမျိုးဖြစ်၍ ထီးကို စောင့်သောနတ်များနှင့်ထီးလုပ်ပုံ လုပ်နည်း၊ မည်သို့သုံးစွဲသည်တို့ကို ရွှေဘိုနိဒါန်း၌ ဖော်ပြထားသည်မှာ *ကနကဒဏ်ထီးကို သမ္မာဒေဝနတ်သမီးစောင့်သည်။ သမ္မုတိထီးကို သမ္မုတိနတ်သမီး စောင့်၏။ သမုက္ခထီးကို သမုက္ခန ...
နံကရိုင်းမယ်တော် သည် မြန်မာ့မိရိုးဖလာကိုးကွယ်ယုံကြည်သည့် နတ်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ပဲခူးတလိုင်းမယ်တော်ဟူသော ရိုးရာနတ်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ တွံတေး၊ဒလ၊မုတ္တမ၊မော်လမြိုင်၊ရန်ကုန်စသော မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသသားမျာ၏ အထူးပူဇော်မှုခံရသော ရိုးရာနတ်မယ်တော်လည်းဖြစ်၏။
ပဉ္စသီခနတ်သား ဆိုသည်မှာ ပဉ္စသီခ ဦးစွန်း ငါးခုရှိသော နတ်သား ဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား တာဝတိံသာတွင် ဝါတွင်းသုံးလပတ် တရားဟော၍ လူ့ပြည်သို့အဆင်းတွင် ပဉ္စသီခ နတ်သားက တေးဖြင့်ဖျော်ဖြေသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ပျဉ်ထောင်ရှင်မ သည် မြန်မာ့မိရိုးဖလာကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည့် နတ်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ပျဉ်ထောင်ရှင်မသည် အင်း၊ ကန်များကို အပိုင်စားရသည် တန်ခိုးကြီးသည့် နတ်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။
ပြာပုံတောင်ရှင်မ သည် မြန်မာလူမျိုးများ ရိုးရာဓလေ့အလျောက် ကိုးကွယ်ကြသည့် နတ်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ပြာပုံတောင်ရှင်မ၏ နတ်နန်းသည် အလောင်းတော်ကဿပဘုရားသို့ သွားရာလမ်း၏ ပြာပုံတောင်တွင် တည်ရှိသည်။
ထိုအချိန်တွင် သုံးမြို့ရှင်ထံ၌ တူတော်စပ်သူ ပညာဗလသည် အမှုထမ်းလျက်ရှိ၏။ တူဖြစ်သူသည် မြို့ဝန်သမီးကို မယူဘဲ သူကြီးသမီး မအောင်ဖြူနှင့် ယူလိုက်လေသည်။ ထိုအခါ သုံးမြို့ရှင်သည် ပညာဗလကို ဒေါသထွက်ကာ ဘုရင်အား "ပညာဗလသည် တိုင်းပြည်ကို လုပ်ကြံပါမည်" ဟု ကုန်းချေ ...
အလုံဘိုးတော်ကြီး ခေါ် ဗဒုံနတ် သည် မြန်မာ့မိရိုးဖလာကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည့် နတ်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ပုဂံပြည် အနော်ရထာမင်းလက်ထက်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် နတ်လည်း ဖြစ်သည်။
မနှင်းဆီနတ် ပေါက်ပေါက်ခဲ့သည့် ခုနှစ်သက္ကရာဇ်ကိုမူ မသိရှိရပေ။ ချင်းတွင်းမြစ် အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ" ဟလင်းကြီး” အရပ်ကို" ဟံသာနဂရ” ပြည်ဟု သမုတ်ကာ ပြူမင်း၊ ပြုံးမင်း ညီနောင်သည် အုပ်ချုပ်လျှက် ရှိသည်။ ထိုအချိန်တွင် သဟမင်ဂျီရွာတွင် သူကြွယ်တစ်ဦး၌ ရုပ်အဆင်းလက ...
မယ်ဖြူ မယ်ညို သည် မြန်မာ့မိရိုးဖလာကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည့် နတ်ညီအစ်မနှစ်ပါး ဖြစ်သည်။ မယ်ဖြူ မယ်ညို နတ်ညီအစ်မတို့သည် ပျဉ်းမနားမြို့၊ ဆင်ဖြူတောင်နှင့် လှေခွင်းတောင်တွင် ထင်ရှားပြီး ရိုသေကြည်ညိုခြင်း ခံရသည့် နတ်နှစ်ပါး ဖြစ်သည်။
ဗန်းမော်စော်ဘွား စပ်ပုန်းထံသို့ မိုးမိတ်စော်ဘွား သိုင်းစော်ဘွားသည် သမီးကညာ လာရောက်တောင်းရမ်း၏။ ထိုအခါ ဗန်းမော်စော်ဘွားသည် ပေးပါမည်ဆိုကာ မိုးမိတ်မှ လာရောက်ကြိုဆိုကြသူများအား သူ၏ မြင်သူငေးရလောက်သည့် သမီး" နန်းလှဖြူ” ကို ပြသ၏. ထို့နောက်တွင် လုံခြုံသ ...
စန္ဒီ၊ ပရမီသွာ၊ ဗိဿဏိုး အစရှိသော ဗြဟ္မဏပုဏ္ဏားတို့ ကိုးကွယ်သော နတ်ကြီးတို့ကို အကြီးအမှူးထား၍ အမျိုးမြတ် သော ပုဏ္ဏားတို့၏ အယူဝါဒအားဖြင့် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာပုဒ်နှင့် ပုဏ္ဏားတို့ ကို လှူဒါန်းပူဇော်ပြီးလျှင်၊ တိရစ္ဆာန်သတ္တဝါတို့ကို သတ်၍ လည်ချောင်းသွေးဖြင ...
ပုဂံနယ်တွင် ချောင်းကိုးဆယ့်ကိုးခုမှ စုပေါင်းကာစီးဆင်းသည့် ရေစီးသန်သည့် ဆင်တဲဝ ခေါ် ယမားချောင်း တည်ရှိ၏။ ထိုယမားချောင်းသည် မိုးညို့လာပါကပုပ္ပါးတောင်ခြေ၌ မြင်းနှင့်ပင် မည်သူမျှ မဖြတ်ကူးဝံ့လောက်အောင် ရေစီးသန်လှသည်။ ဖြတ်ကူးသူများသည် ရေစီးတွင် လွင့်မျ ...
ရေယဉ်ကတော် သည် မြန်မာ့မိရိုးဖလာကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည့် နတ်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ရေယဉ်ကတောကို ရေယှဉ်ကတော်၊ အနောက်မယ်ရေယဉ်၊ အမယ်အိုကြီးနတ် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ခေါ်ကြသေးသည်။
ရွှေကျွန်းတော်ရှင်နှင့် ကျောက်ဆောင်ကတော် သည် မြန်မာ့မိရိုးဖလာကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည့် နှတ်မောင်နှမ ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့သူမြို့သားများသည် ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့အား စောင့်ရှောက်သည်ဟု ယုံကြည်မှုရှိကြသည်။
သက္ကရာဇ် ၅၃၃ ခုနှစ်တွင် ပုဂံပြည်၌ အလောင်းစည်သူမင်း၏ မြေးတော် မင်းယဉ်နရသိင်္ခ ထီးနန်းစံမြန်းလျက်ရှိ၏။ ထိုအချိန်တွင် ပြော့လူမျိုးတို့သည် တောသို့ဝင်၍ ထင်းခုတ်သွားရာ ဝါးလုံးကြီးတစ်ခုအတွင်းမှ အဆင်းအင်္ဂါနှင့် ပြည့်စုံသည့် အမျိုးသမီးကို ရလလေသည်။ ထို့နေ ...
ရွှေဖျင်းညီနောင်တို့သည် လည်း အနော်ရထာမင်းထံပါးတွင် သူရဲကောင်းစစ်သည်တော် အဖြစ်အမှုတော် ထမ်းခဲ့ကြသည်။ ရန်သူ့နယ်မြေအတွင်းစည်းသို့ လျှို့ဝှက်ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်ရသော အထူးစစ်သည် အဖြစ်ပင် အမှုတော် ထမ်းခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် တရုတ်ဘုရင် ဥတည်ဘွား ၏ ကိုယ်ရံတေ ...
သမိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုမူ တိကျစွာ မသိရှိရပေ။ မွန်လူမျိုးများ၏ အိမ်တွင်းနတ်" ရွှေလေးရင်နှင့် ရွှေကညင်နတ်” ဟု ဆိုကြသည်လည်း ရှိသည်။ မွန်လူမျိုးတို့၏ ရိုးရာနတ်ဟုလည်း ဆိုကြသည်။
လိပ်ပုပ်နှင့် ပတ်သက်သည့် သမိုင်းကိုမူ စာပေများတွင် တွေ့ရှိရခြင်း မရှိပေ။ သို့သော် သက်ကြီးရွယ်အို မွန်လူမျိုးတို့၏ စကားဖြင့် မှတ်သားခဲ့သည်များ ရှိသည်။ ဒီရေစောင့် နတ်သမီး၏ စီးတော်ယာဉ်မှာ လိပ်ဖြစ်သည်။ အသားမင်းသားနှင့် နတ်သမီးတို့သည် တန်ခိုးပြိုင်ကြသ ...
ဝိသကြုံ သည် သိကြားမင်း၏ လက်စွဲတော် နတ်သားကြီးဖြစ်ကာ နတ်ပြည်တွင် သိကြားမင်းကြီး စေခိုင်းသည့် အဆောက်အအုံဗိမာန်များကို ဖန်ဆင်းဆောက်လုပ်ပေးရသည့် နတ်သား ဖြစ်သည်။
သုဗြဟ္မနတ်သားသည် နတ်သမီးတစ်ထောင်တို့နှင့်အတူ ထွက်လာ၍ ငါးရာသော နတ်သမီးတို့သည် သစ်ပင်ပေါ်သို့တက်ကာ ပန်းများကို ခူးလျက်ရှိ၏။ ငါးရာသောနတ်သမီးတို့သည် ပန်းများကို ကောက်ကာ သုဗြဟ္မနတ်သားကို ပန်ဆင်ပေးနေ၏။ ထိုအခိုက်တွင် ပန်းပင်များပေါ်မှ ပန်းများကျမလာသည်ကိ ...
သုံးမြို့ရှင်ထံတွင် ပညာဗလအမတ်နှင့် သားဖြစ်သူ ခြေရာတစ်ထောင် မောင်မဲခေါင်တို့သည် အမှုထမ်းကြသည်။ တစ်နေ့သောအခါ မည်သူကမျှ ဖမ်းဆီးရန် မဝံ့သည့် တောဆင်ရိုင်းတစ်ကောင်သည် သောင်းကျန်းနေလေသည်။ ထိုဆင်ရိုင်းကြီးကို မောင်မဲခေါင်သည် ထွက်၍ ဖမ်းဆီးပြီး မင်းကြီးအား ...
အဘိုးနှင့် ပတ်သက်သည့် ခုနှစ်သက္ကရာဇ်နှင့် မြို့ရွာကို မသိရှိရပေ။ အဘိုးသည် တံငါ၊ မုဆိုးအလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးပြီး မွန်လူမျိုး ဘိုးတော်ကရင်၊ အချို့ကမူ ဗမာကရင်လူမျိုး" အပိုး” ဟု ပြောကြသည်။ အဘိုးအား နတ်ဘဝမရောက်မီ လူ့ဘဝ၌ပင် ရပ်ရွာများတွင် နတ်ကန္နားပေးသည့ ...
အောင်ဒိုင်နတ်သည် နွားကျောင်းသားမှ နတ်ဖြစ်သွားသူ ဖြစ်သည်။ တောင်သူလယ်သမား နွားမွေးမြူသူများ ကိုးကွယ်ကြသည့် နတ်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ အောင်ဒိုင်နတ်သည် နွားများကို စောင့်ရှောက်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အောင်နိုင်နတ်ကို နွားတဲတွင် စင်ဖြင့်ထားကာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ နွား ...
စိန်ရတုနှစ်တံဆိပ် သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော နှစ်မြောက် စိန်ရတုတပ်မတော်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် တပ်မတော်တွင် စစ်မှုထမ်းသက်နှစ်နှင့်အထက် ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စစ်မှုထမ်းများအား ချီးမြှင့်သည့် တံဆိပ် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ...
အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် ဂုဏ်သိက္ခာအားဖြင့် အမြင့်မားဆုံးသော ဆုတံဆိပ် ဖြစ်သည်။ တိုက်ပွဲအတွင်း မိမိတို့၏ အသက်ကို ပဓာနမထားပဲ နိုင်ငံတော် အကျိုးအတွက် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ စွန့်လွှတ်စွန့်စား တိုက်ခိုက်သော စစ်သည်များကိုသာ ချီးမြှင့် လေ့ ရ ...
သီချင်းအမည် =" ကျေးရွာဝါဒ” သီဆိုသူ = ပစ်တိုင်းထောင် နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင် ဟာ မြန်မာ့ဂီတလောကမှာ ရှေးရိုးရော သံဆန်းပါ ထုံးလိုချေ ရေလိုနှောက်နိုင်တဲ့ စာဆိုတစ်ယောက်ပါ။ သူရေးခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေ အများကြီးထဲမှာမှ ကျေးရွာဝါဒ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ညွှန်းပါရစေ။ ...
နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင် ပထမဦးဆုံးရေးပြီး "ယုဇနမအေးစိန်" သီဆိုသော မယ်အေးကပို့တဲ့မေတ္တာ သီချင်းသည် ထိုခေတ်အနေအထားအရ အသံများသည် ဆန်းလွန်းသောကြောင့် လက်ဦးဆရာများက "ဒီသူငယ် ဟာ တို့လို သီချင်းကြီး၊ သီချင်းခန့် ကို တတ်ပုံမရပါဘူး ကောက်ရိုးမီးပါ"ဟု ပြောသည့်အခါ ...
နဂါးနီစာအုပ်အသင်းသည် ကိုလိုနီခေတ်ဦးကာလက ထင်ရှားခဲ့သော အသင်းကြီးဖြစ်ပါသည်။ သခင်နုနှင့် ဦးထွန်းအေးတို့က ဦးဆောင်၍ ၁၉၃၇ နိုဝင်ဘာ ၄ တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နဂါးနီစာအုပ်အသင်းကြီး၏ မူဝါဒများကို သခင်လူငယ်များက ပြည်သူပြည်သားအများ သိကြစေလိုသဖြင့် သီချင်းတစ်ပု ...
နတ်သျှင်နောင် သီချင်းသည် တေးရေး အလင်္ကာကျော်စွာ မြို့မငြိမ်း ၏ ထင်ရှားသောသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ နတ်သျှင်နောင်၏ဘဝ စစ်ထွက်ယောက်ျားတစ်ဦး၏ ခံစားချက်ကို ဖွဲ့ဆိုထားသောသီချင်းဖြစ်သည်။ နတ်သျှင်နောင်၏ စစ်ချီမယ်ဘွဲ့ရတု ပထမအပိုဒ် "ပေါ်နွေလှလျှင်" ကိုသီချင်း ...
၂ ခေါက် ။ ငါတို့မြန်မာပြည် မိဘတိုင်းကရယ် ဗိုလ်အောင်ဆန်းလို သူရဲကောင်းမွေးရမယ်။ ငါတို့မြန်မာပြည် မိဘအပေါင်းတို့ကရယ် အာဇာနည်အစစ်ကို ရှိဘို့မွေးရမယ်။ ဩော် ဘုရင့်နောင်နဲ့ ရာဇာဓိရာဇ်တို့လို မင်းရဲကျော်စွာ ပမာပုံဆောင်အလောင်းဘုရားတို့လိုကွယ် မြန်မာတိုင် ...
ဒေါ်မေလှမြိုင် ဆိုထားတဲ့" မြိုင်” သီချင်းပါ။ မူရင်းအဆိုရှင်ကတော့ မြခြေချင်းမငွေမြိုင်တဲ့။ ရွှေမန်းတင်မောင် ရဲ့ ကန့်ကူလက်လှည့်ဆရာမ ဖြစ်ပြီး အင်မတန်ဇာတ်စီးကောင်းတယ် လို့ နံမည်ကျော်ပါတယ်။ ရွှေမန်းရဲ့ ဗုဒ္ဒဝင်ဇာတ်တော်တွေမှာ သူ့ အနုပညာအမွေတွေကို တစွန် ...
ရွှေဘိုသနပ်ခါး သီချင်းကို မန္တလာမြင့်၏ အကျော်ကြားဆုံးတေးဟု ဆိုကြပါသည်။ `အစကတော့ဖြူဖြူ ညိုသွားပြီ၊ အခုတော့ ညိုသွားပြီ၊ ပျိုမှားပါပီရှင် ခေါ်လာမိတယ်´ အစချီ ၎င်းသီချင်းကို နန်းတော်ရှေ့ ဆရာတင်က ရေးဖွဲ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတင်က သူ၏ထုံးစံအတိုင်း `ကြံ ...
ရွှေမန်းဆီသို့ သီချင်းသည် ဦးဘသိန်းက ​ရေးစပ်ခဲ့​သော မန္တ​လေးမြို့ဖွဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ရွှေမန်းဆီသို့ဟု အစချီ​သော ဤသီချင်းသည် မန္တ​လေးနန်း​တော်၏ သာယာလှပပုံ၊ ရန်ကင်း​တောင်၊ ​အောင်ပင်လယ်ကန်များအ​ကြောင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် မန္တ​လေး​တောင်​ပေါ်မှ​နေ၍ ပ ...
ဆရာမြို့မငြိမ်း၏ လူချွန်လူကောင်း သီချင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာဗိုလ်ကလေးတင့်အောင် ရိုးသားမှုဖြင့် ချီးကျူး ပြောဆို ခဲ့ဖူးကြောင်း စာရေးဆရာ ချစ်ဦးညိုကလည်း ပထမအကြိမ် စင်ကာပူ စာပေဟောပြောပွဲတွင် ထည့်သွင်းပြောသွားခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုလက်ထက်က ၎င်း၏ ပြည်တော ...
Big Hero6(ရုပ်ရှင်)
Big Hero6မှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ထုတ်လုပ်သော အမေရိကန် အန်နီမေးရှင်းဇာတ်လမ်း ဖြစ်သည်။ ဤဇာတ်လမ်းမှာ မာဗယ်ရုပ်ပြဖြစ်သော Big Hero6ကို အခြေခံရိုက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဟာမာဒါဆိုသော သိပ္ပံပညာကို စိတ်ဝင်စားသော လူငယ်လေးမှ စူပါဟီးရိုးအဖွဲ့ထူထောင်ခြင်းအကြောင်း ရို ...
Home Alone (ရုပ်ရှင်)
Home Alone ရုပ်ရှင်သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်က ထုတ်လုပ်သော အမေရိကန်ဟာသဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ခရစ္စမတ်ပိတ်ရက်တွင် မိသားစုခရီးမှ အိမ်တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သော ကလေးလေးမှ သူ့အိမ်ကို သူခိုးများရန်မှ ကာကွယ်သောအကြောင်းဖြစ်သည်။
Never Back Down သည် ၂၀၀၈ခုနှစ် martial arts ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင် Sean Fair, Amber Heard, Cam Gigandet နှင့် Djimon Hounsou တို့ပါဝင်သည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ရက်နေ့တွင် ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်သည် တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ လိင်မှုကိစ္စ၊ ပါတီ ...
Suicide Squad (ရုပ်ရှင်)
Suicide Squad သည် အမေရိကန် လူစွမ်းကောင်း ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး DC ကာတွန်းများမှ လူဆိုးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Suicide Squad ကို အခြေခံထားပါတယ်။ David Ayer က ရိုက်ထားပြီး Will Smith, Jaredd Leto Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernand ...
Wonder Woman (၂၀၁၇ ရုပ်ရှင်)
Wonder Woman သည် အမေရိကန် လူစွမ်းကောင်း ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး DC ကာတွန်းများမှ Wonder Woman ဇာတ်ကောင်ကို အခြေခံထားပြီး Warner Bros. Pricture မှ ဖြန့်ချိသည်။ ဒါရိုက်တာ Patty Jenkins က ရိုက်ထားပြီး ဇာတ်ညွှန်း Allan Heinberg နှင့် ဇာတ်လမ်း Heinberg, Zak ...
ထရန်စဖော်မာ စက်ရုပ်များ - နောက်ဆုံး သ ..
မဉ္ဇူရီနယ် အက်ဘီမြို့ပြင်က ဘေဘုတ်သုံး ..